10 Elele Niile Obere Azụmaahịa Ghọtara na Ahịa Ahịa Digital | Martech Zone
We gbara Scott Brinker ajụjụ ọnụ banyere nzuko Teknụzụ Azụmaahịa ya na-abịa, Martech. Otu n'ime ihe m tụlere bụ ọnụọgụ azụmaahịa anaghị etinye usoro maka atụmatụ ha ugbu a ọrụ. Enweghị m obi abụọ ọ bụla na ụlọ ọrụ nwere, dịka ọmụmaatụ, oke okwu onu ndị ahịa, nwere ike inwe azụmaahịa na-eto eto ma na-aga nke ọma. Mana nke ahụ apụtaghị na atụmatụ ịzụ ahịa dijitalụ agaghị enyere ha aka.
A usoro ahia ahia nwere ike inyere atụmanya ha aka n'ịchọpụta mkpebi nzụta ahụ, nwere ike inye aka belata nrụgide na ngalaba ahịa, nwere ike belata usoro ahịa ahụ, ọbụnakwa nwee ike nyere ụlọ ọrụ aka ịre ahịa ndị ahụ. Ọ bụghị nke ukwuu ma ihe ị na-eme na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ihe ị na-anaghị eme na-enyere ụlọ ọrụ aka ịrụ ọrụ nke ọma ma mejupụta oghere ndị ahụ. Nnweta, njigide na mbugharị nwere ike ịdị mfe karịa site na iji usoro azụmaahịa dijitalụ dị elu agafe ọwa.
Ahịa Digital CJG agbakọtawo uru 10 a nke Digital Marketing maka Small Business:
Ahịa Digital jikọtara gị na ndị ahịa na thentanetị
Dijitalụ Ahịa na-eme ka ọnụego ntụgharị dị elu
Ahịa Digital Na-azọpụta Gị Ego
Ahịa Digital Na-enyere Ọrụ Ndị Ahịa Aka-A Oge
Ahịa Digital jikọtara gị na ndị na-eji ekwentị
Ahia ahia dijital na-enyere aka inweta ego di elu
Ahịa Digital na-anapụta ROI dị elu site na Mgbasa Ozi Gị
Ahịa Digital na-edobe Gị na Ndị Asọmpi
Ahịa Digital nwere ike inyere gị aka ịlụ ọgụ na nnukwu ụlọ ọrụ
Digital Marketing na-akwadebe gị maka Internet Ihe
Ihe dị ka 72% nke ndị na-azụ ahịa na-ejikọrịrị aha na ụdị site na ụzọ ntanetị ahịa dijitalụ dị iche iche na ihe omume dị ka akụkọ sitere n'aka Mashable. Mana ihe dị ịtụnanya n'agbanyeghị agbanyeghị na ndị ahịa na ndị nwe azụmaahịa na-agbanye n'okporo ụzọ dijitalụ, ọtụtụ obere azụmaahịa ka na-egbu oge ịhọrọ ọnọdụ a. Jomer Gregorio, CJG Digital Ahịa
Tags: uruAhịa Digital CJGuru ahịa dijitalụusoro ahia ahiainfographicdị ọkara ahịaobere azụmahịaSMB